युवतीहरुको सबभन्दा पहिले – पुरुषको कुन ‘अङ्ग’ मा आखा जान्छ ? हेर्नुहोस —
युवतीहरुको सबभन्दा पहिले पुरुषको कुन अ’ङ्गमा आखा जान्छ ? हेर्नुहोसएजेन्सी – युवतीहरुको सबभन्दा पहिले पुरुषको कुन अ’ङ्गमा आखा जान्छ ? भनेर गरिएको एक सर्बेक्षण मा युवतीहरुको जबाफ सुनेर सब चकित पर्ने एक तथ्य सार्बजनिक भएको छ।
धेरै युवती हरुले सर्बप्रथम पुरुषको प्रसनालिटिमा आखा जाने बताएका छन्। उनीहरुले पुरुष संग भएको भौ’तिक सु’ख वा आवरणमा देखिएको कुनै पनि बस्तु संग आ’कर्षक हुदैनन्। महिला हरुले कुनै पनि पुरुष संग नजिक हुनु भन्दा पहिले पुरुषका अनिबानि चाल चलन र उसको बिचारमा महिला ध्यान जाने गर्दछ।
२०७८ श्रावण १२, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 1522 Views